Ngathi | Imveliso yaseKylin
Ukusukela ngo-1995, njengomvelisi onelayisensi, othe ngqo kunye nobuchwephesha eTshayina, uKylin Manufactory uye waba yenye yeenkampani ezikhokelayo kolu shishino. Umenzi we-OEM / i-ODM kunye nomthumeli ngaphandle ojolise ekuveliseni imidlalo yebhodi, imidlalo yamakhadi, amakhadi okudlala, izinto zomdlalo, iiposta zobugcisa zevelvet, ibhokisi yokupakisha kunye nezinye izinto. Sisebenzisa iifektri ezine zemveliso kubandakanya; ushicilelo, iinkuni, ingqekembe kunye neplastiki.
Sisebenzisana namalungu omdlalo ongaphezulu kwe-10 kwimizi-mveliso yezobuchwephesha yokwenza kunye nokuthumela kwelinye ilizwe malunga nezigidi ezi-1 zeemveliso zomdlalo ngonyaka. Sinamava abasebenzi, izixhobo ezikumgangatho wehlabathi kunye neenkonzo ezizezakho ukunceda abathengi bethu ukuba bafumane inkonzo epheleleyo yebhodi yokuvelisa kunye nemidlalo yamakhadi phakathi kwabanye abaninzi.Zonke izixhobo zethu ziphakathi kwezona zintle kwihlabathi liphela ukuqinisekisa iimveliso ezisemgangathweni ophezulu. Iikhompyuter zethu zobuchwephesha, izixhobo zangaphambi kokushicilela kunye noomatshini bokushicilela zihlaziywa rhoqo ukuze zihambisane netekhnoloji yakutshanje kushishino lokushicilela kunye nokupakisha ukuze siqiniseke ukuba sivelisa kuphela umsebenzi okwinqanaba eliphezulu.
ISebe lethu leMiboniso bhanyabhanya lixhotyiswe ngeprosesa yeplate ezenzekelayo, isakhelo sokuvezwa, umshicileli woqhagamshelo lwefilimu, inqindi yefilimu, kunye nepunch yePS. Sinezinto zonke zokushicilela izixhobo ezinje ngomatshini wokucinezela incwadi, ibhodi yamakhadi e-laminator, oomatshini bokusika kunye nokusika, oomatshini bokuzenzekelayo bokufa, oomatshini bokuncamathelisa, oomatshini bokucheba amandla ekoneni, i-PP Laminator, oomatshini bokucoca ioyile abadlula i-UV, oomatshini bokucoca, njl. Mveliso yethu zeplastiki oomatshini inaliti-10 kunye nomthamo ezininzi ezahlukeneyo. Sinesebe le-OEM elinamagcisa akhethekileyo ophuhliso lweemveliso kunye neendawo zethu zokuprinta kunye nokutshiza endaweni.
Ezinye iinkonzo ezinxulumene noko esinokubonelela ngazo zibandakanya ukudala ukuhlekisa, umzobo wobugcisa, iifayile ze-3D kunye nokubumba kwenaliti. Kukho ngaphezu kwama-500 umngundo ezikhoyo inaliti yethu ukuvelisa phantse zonke iintlobo iziqwenga umdlalo ezinxulumene kushishino umdlalo. Sigxile ekuveliseni i-backgammon, i-roulette kunye nezixhobo zazo. Iiplastikhi zesiko, iinkuni kunye neemveliso zentsimbi ziyafumaneka ngenxa yamava ethu amakhulu kwishishini lenaliti yeplastikhi, ukuphosa, ukubetha, ukwenza i-slush ukwakha, ukwenza i-acrylic, ukuvelisa i-acrylic, ukushicilela ubushushu, i-silkscreen, ukuprinta iphedi, ukutshisa okushushu , isithuba sokucoca kunye nokunye.
Sikholelwa ekubeni unxibelelwano oluyimpumelelo phakathi kwabavelisi kunye nabaxhasi lusekwe kukuthembeka kunye nokunyaniseka. Ukubambelela ngokungqongqo kulo mthetho-siseko kusivumela ukuba sihlangane rhoqo kwaye sidlule kulindelo lwabathengi bethu. Ikwagcina abathengi bethu bebuya ngakumbi.
Uncedo lwethu olwahlukileyo luyinyani kwaye ithe ngqo ngamaxabiso amaTshayina, iimveliso ezilungileyo nezikhuselekileyo, unxibelelwano lomntu kunye noxanduva olukhulu nasekuhambiseni ixesha.
I-Kylin Manufactory yamkela ngokufudumeleyo abathengi abatsha nabadala, abathengi bangaphakathi nabangaphandle ukuba batyelele kwaye babeke iliso kwinkampani yethu.
Imigaqo yethu ekhokelayo ibonelela ngentembeko, ukuthembeka, intsebenziswano kunye nokuphathwa ngokufanelekileyo kwabo bonke abathengi ngokuba yinkampani elungileyo kwicandelo lethu lemveliso. Sizinikezela kuphuculo oluqhubekayo kwiinkqubo zethu, iimveliso kunye neenkonzo.